भिडियो – NepalajaMedia
हास्यकलाकार बान्द्रे(सुरज चापागाईं) अचेल मेरि बासैमा देखिदैनन् ।डेढ दशक अगाडि कलाकारिता सुरु गरेका उनी मेरि बासैबाट आम जनता समक्ष चिनिए ।जुन टेलिफिलिमले उनलाई दर्शकमाझ चिनायो त्यहि टेलिफिल्ममा उनी नदेखिनुको कारण के हो त ? चार बर्ष पहिला उनै बान्द्रे बिवाह बन्धनमा बाधिए ।बैवाहिक जिवनमा जोडिएपछि भने उनी कलाकारितासगै अर्को पेशातिर एकदमै आकर्षित भए ।कलाकारिता छोडेर कृषि पेशामा होमिएका बान्द्रेले महिनाको लगभक चारदेखि पाच लाख आम्दानि गरिरहेका छन् । आजको यश शृङ्खलामा तिनै बान्द्रे जो तपाईं हामी सबैको प्रिय पात्र हुन् जो निकै लामो समयपछि मिडियामा आइ आफ्नो सम्पूर्ण जानकारी सहित विशेष भिडियो पेश गर्दछौ ।कृषिलाई आफ्नो कर्म ठानेर यसरी लागिपरेका बान्द्रे यानकि सुरज चापागाईलाई हाम्रो टिम सम्मान गर्दछ । गरे के हुँदैन र ? भन्ने उखानलाई मेरी बास्सैका बान्द्रेले सत्य साबित गरिदिएका छन् । बान्द्रेला
एजेन्सी : न्युजील्यान्डको एक भेडा फार्मबाट भागेर ६ वर्ष सम्म पहाडमा लुकेको एक भेडाको शरीरमा २७ किलो ऊन उ’म्रेको छ । फार्ममा हुँदा उसको शरीर बाट ऊन नियमित रूपमा काढिने गरेको थियो तर पहाडमा ऊन बढ्दै गयो । पहाडमा रहँदा शिकारी ब्वाँसोहरूले भेडालाई खान खोजेको भए पनि उसको मोटो ऊनका कारण उसको शरीरमा दाँत गाड्न नसकेकोले ऊ बाँचेको समेत बताइयो । तर न्युजील्यान्डका पत्रकार ल्युक एप्पलबाई तथा अन्यले देशमा शि’कारी ब्वाँसोनै नभएको भन्दै यस एंगललाई खारेज गरेका छन् । तर बेन्डिगो स्टेसनबाट ऊन काढ्ने बेलामा भागेको भेडा पहाडको एक गुफामा लुकेको थियो । ६ वर्षपछि ऊन काढ्दा २७ किलो निस्कियो। त्यसलाई लिलाम गरेर बेचिएको छ र उठेको रकम बालबालिकाको परोपकार संस्थालाई दिइएको छ । न्युजील्यान्डको एक भेडा फार्मबाट भागेर ६ वर्ष सम्म पहाडमा लुकेको एक भेडाको भिडीयो हेर्नुहोस् ।
नेपालमा पछिल्लो सम्बन्धबिच्छेदको घटना बढ्दो क्रममा छ । कतिपय सम्बन्धबिच्छेद श्रीमान् श्रीमती नै नेपालमा भएतापनी एक अर्कासंगको बैमनस्यताको कारणले भएको छ भने श्रीमान् श्रीमतीबीचका अधिकांश सम्बन्धविच्छेद वैदेशिक रोजगारका कारण नै हुने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा दुईतीन वर्ष बिताएर घर फर्किएपछि श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्धमा फाटो आउने गरेका कारण सम्बन्धबिच्छेद गर्ने चलन बढ्दो रहेको रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा दुईतीन वर्ष बिताएर घर फर्कने पुरुषले श्रीमतीको आचरणमाथि शंका गर्नु, श्रीमान् विदेशमै रहेका बेला श्रीमतीको परपुरुषसँग सम्बन्ध जोड्नुजस्ता कारणले सम्बन्धविच्छेद गर्ने दम्पतीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस्तै श्रीमानको ज्यादतीका कारणले पनि सम्बन्ध बिच्छेद नभएको होईन । यसका साथै कम उमेरमै विवाह हुनु र पछि उमेर परिपक्व हुँदै गएपछि एकले अर्कालाई मन नपराउन
काठमाडौ । केही दिन यता नायक किशोर खतिवाडा, लक्ष्मी गदाल र आफुलाई महिला अधिकारवादी बताउने सिर्जना वाग्लेको कारणले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । किशोर खतिवडालाई विभिन्न आरोप लगाउँदै उनको प्रेमिका लक्ष्मी गदाल सार्वजनिक भएपछि सुरु भएको यो घटनामा नयाँ मोड आएको छ । अन्तिममा लक्ष्मी र किशोर मिले भने महिला अधिकारकर्मीलाई पैसाको लागि वार्गेनिगं गरेको आरोप लगाए । लक्ष्मी गदालले आफुलाई सिर्जना वाग्लेले किशोरसंग १० लाख रुपैया मागेर मलाई पनि २ लाख रुपैया दिनु भनेर सार्वजनिक गरिदिएपछि उनीहरुबीचको विवाद बढेको हो । किशोर र लक्ष्मी तीन वर्ष संगै वसेका थिए । उनीहरुबीच श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध थियो भने पछि सिर्जनालाई पैसाको वार्गेनिगं गरेर आफुहरुबीच अनावश्यक फाटो पारेको भन्दै लक्ष्मीले उल्टै सिर्जनालाई आरोप लगाएकी थिइन् । त्यसपछि सिर्जनाका कारण हामी पनि समस्यामा परको छौं भन्दै अन्य ब्यक्ति पनि मिडियामा आ
छोरिले आफ्नो घर छोडेर परायाको घर जाने प्रचलन परापुर्व कालदेखिनै चलायमान प्रथा हो जसलाई बिवाह नामकरण गरियो ।छोरी मान्छे भएपछि अरुको घर जानैपर्ने अवधारणा सहित यो अनन्तकालसम्म निरन्तर रहने र सो रहेमात्रै भाविपुस्ताहरुले आफ्नो ठाउँ पाउने कुरो सत्य हो । सामाजिक संजालमा हामिले चेलिले आफ्नो घर छोडेर सो घरलाई माइति बनाउदैगर्दा बिदाईको बेला धेरै चेलिहरु भावुक भएको नै पाउछौ ।किन मन नदुखोस् जुन घर आफ्नोे थियो अब त्यो माइति भयो ,मान्छे उहीँ छन् तर सम्बन्ध फरक भयो ।त्यस्तै कुनै बेहुलि भने बिदाईको बेला नाच्दै ,गाउदै ,रमाउदै गएको पनि हामीले सामाजिक संजालमै देखेका छौ । आजको यश शृङ्खलामा हामी त्यस्तो एक अमर जोडिको बिवाह र बिदाई तपाईहरु समक्ष पेश गर्दैछौ ।सो बिवाह भरि बेहुलि भावुक नै रहिन् अन्तिमपटक उनि घरमा भएका आफ्नो घरकासग मिल्दैथिइन उनी त्यहाबाट जान साथ त्यो आगन अब माइति हुन्थ्यो त्यसकारण आँसु झर्
‘फोटो फिरिममा -२’ हेरेपछि शिशिर भण्डारीको श्रीमतीले यस्तो भनिन् । (भिडियो हेर्नुस)
संचारकर्मी तथा कलाकार शिशिर भण्डारी एक्कासी असपतालमा भर्ना भएका छन,बिगत ८ महिना देखि उनि अस्पतालमा रहेको भिडियोमा डाक्टरले जानकारी दिएका छन ,शिशिर भण्डारीको रिपोर्ट हेर्ने डाक्टरबाट उक्त जानकारी आएको हो।यो सब चर्चित गीत ‘फोटो फिरिममा’ सिक्वेल सार्वजनिक गरिएको छ । ‘फोटो फिरिममा २’को ‘रुमाल चिनो छ’ बोल रहेको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा प्रताप दास, कुमार अभि र रचना रिमालको स्वर रहेको छ । शिशिर भण्डारीको शब्द सृजना र संगीत रहेको उक्त गीतमा संगीत संयोजन भने बिशाल निरौलाको रहेको छ । शिशिर भण्डारीले नै निर्देशन गरेको उक्त गीतको भिडिओमा स्वयं शिशिर, रिस्ता बस्नेत, जुना सुन्दास, प्रकाश रामदाम, बसन्त भण्डारी, श्रद्धा गौतम, पूजा गौतम, सरु गौतम, एलिना कार्की, शुसन गौतम, लक्ष्मणराज अधिकारी, अबिनाश गौतम र निक शर्माको अभिनय रहेको छ । उक्त गीत यो समाचार तयार पार्दा युट्युबमा नेपाल ट्रेण्डिङको चौथो स
लकडाउनमा घरमै थुनिएका बालबालिकाको मानसिकतामा कस्तो असर गर्छ ? अभिभावकले के गर्ने ? मनोविद गोपाल ढकालको निकै महत्वपूर्ण सुझाव (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । पछिलो पटक फैलिएको कोरोनाको दास्रो लहरमा बालबालिका पनि प्रभावित भएका छन् । अघिल्लो महामारीमा वृद्धवृद्धाहरु बढी भएका थिए भने दोस्रो लहरको भाइरलमा बालबालिका पनि प्रभावित भएका छन् । सरकारले कोरोना फैलन नदिन र जोखिम कम गर्न भन्दै निषेधाज्ञा लागू गरेको छ । निषेधाज्ञाका कारण परिवार अहिले घरमै छन् । अरु बेला कामको चापले आफ्ना छोराछोरीलाई समय दिन नपाएका बुवाआमाहरुले छोराछोरीलाई केही समय दिन पाएका छन् । तर लामो समय सम्म घरभित्र थुनिएर बस्नुपर्दा बालबालिका र अभिभावक दुवैमा मानसिक समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छन् । बालबालिकाको स्वभाव नै बाहिर जाने, साथीभाईसंग खेल्न मनपराउने खालको हुन्छ । धेरै अभिभावकहरु कोरोनाका कारण बाहिर निस्कन नपाएका कारण टेलिभिजन हेरेर समय पनि विताइरहेका हुन्छन् । टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा आउने नराम्रा समाचारले पनि बालबालिकाको मस्तिष्कमा असर गर्न सक्छ । त्यसैले अहिल
आफ्नो बारेमा गलत समाचार केहि अनलाईनहरुले छापेपछि चर्चित गायक प्रमोद खरेलले आपत्ति जनाएका छन् । हिजादेखि उनको दुर्घटाको खबर केहि अनलाईन न्युजहरुमा भाईरल भएका थिए, जुन गलत थियो, प्रमोदले फेसबुकमा लेखेका छन् । ‘केहि अनलाईन न्युजहरुमा भ्वाईसको सुटिंग बाट फर्कदा मेरो गम्भीर दुर्घटना भयो भनेर भ्रामक कपोकल्पीत र झुटा समाचार प्रकाशन भएकोमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । म एकदम ठिक छु र म कुनै दुर्घटना मा नपरेको जानकारी गरॉउछु । समाचार को नाममा सोसल मिडियाको यसरी दुरुपयोग नगरीदिनु होला कृपया गलत समाचार सुनेर चासो व्यक्त गर्नु हुने सबैलाइ धन्यवाद र यो ग़लत समाचार हो भनेर बुझिदिन हुन सबैलाइ अनुरोध गर्दछु । यसैबिच प्रमोद आफ्नो फेसबुक लाईभमा आएर पनि यस बिषयमा बोलेका छन् । उनले यस्ता समाचारहरुले तपाईको न्युज पोर्टलको भ्युज त बढ्ला तर मेरा शुभचिन्तकहरु र आफन्तहरुको मन दुख्छ भन्दै अबका दिनमा यस्ता सम
रसियाले निर्माण गरेको पहिलो अन्तरिक्ष विमान स्पुतनिकदेखि अहिले स्पेस एक्सले निर्माण गरिरहेको कार्गो रकेटसम्म आइपुग्दा थुप्रै अन्तरिक्ष विमान तयार भएका छन्।थालिएका १३० अन्तरिक्ष प्रोजेक्टहरुमा सबै यात्रा सफल नभए पनि ६३ अन्तरिक्ष यानले सफलतापूर्वक पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रभन्दा बाहिरको यात्रा गरिसकेका छन्। यता, आउँदो सात वर्षमा विभिन्न देशले ३४ वटा अन्तरिक्ष यात्राको तयारी गरिरहेका छन्। त्यसमध्येको एक हो- डियरमुन प्रोजेक्ट। त्यही प्रोजेक्टअन्तर्गत चन्द्रमामा जान छनोट चरणमा रहेका एकमात्र नेपाली युवा वैज्ञानिक हुन्- सुरेश भट्टराई। त्रिचन्द्र कलेजका लेक्चरर तथा नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी (नासो)का अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराई यसमै लागिपरेका छन् अहिले। के हो डियरमुन प्रोजेक्ट ? डियरमुन प्रोजेक्ट स्पेस एक्सको हो। चन्द्रमामा जाने जहाज भने विश्वकै धनाढ्य उद्योगपति एलन मस्कले बनाइरहेको छ। यो जह
काठमाडौ । पारिवारीक समस्याले पुरुषलाई पनि यति कमजोर बनाउँछ की आफ्नो पी डा सहन नसकेर आँशु झार्छन । एक जना रोल्पाको रुटीगढी ९ शखीमा एक जना महिला शुष्मा नेपाली आफ्नो श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा रहँदा झरफुक गर्ने ब्यक्तिसंग हराएकी छन् । विष्णु केसी र शुष्मा नेपालीबीच अन्तरजातिय विवाह भएको थियो । १६ वर्ष अघि समाज र परिवारसंग वि द्रो ह गरेर विवाह गरेका विष्णुले फेरी एक पटक धो का पाएका छन् । उनले श्रीमती सानो सन्तानलाई छोडेर मात्र गइनन् वर्षौसम्म कमाएको सम्पत्ती पनि लिएर गएको आरोप लगाएका छन् । विष्णु केसी जनमुक्ति सेनामा थिए । उनी समाज परिवर्तनका लागि भन्दै राजनीतिमा लागेका कारण उनले अन्तरजातिय विवाह गरेर समाजमा उदाहरण राख्न चाहन्थे । शुष्मालाई विवाह गर्दा पनि उनले सामान्य तरिकाले गरेका थिए । राजनीतिक तरिकाले नै उनले विवाह गरेका थिए । सुरुमा उनी कतार पनि गएका थिए । उनले राम्रै